Aadaafi Dubartoota – siifsiin
Because every man has as boss his wife or his mother, or some other woman in his life, men may rule the world, but women rule the men who rule the world. Thus contrary to appearances, women is boss, the overall boss of the world.
(c.f Anatomy of female Power. Chinweizu.)
“Jireenya isaanii keessatti, dubartii isaan hooggantu qabaachuun isaanii, koorniyaan dhiiraa Addunyaa akka bulchan isaan taasiseera. Dubartiin kunis, haadha warraa (niitii) yookaan haadha dhiira deesse yookaanimmoo dubartii biraa carraa jireenyaan walitti dhufan ta’uu malti. Kanaafuu warri dhiiraa Addunyaa bulchuu danda’aniiru. Haata’uutii garuu, dubartiin dhiira Addunayaa bulchuulle ni bulchiti. Harka lafa jalaan maarree, dubartiin hoggantuu hooggaanaa Addunyaa maraati jechuudha.” Jedha Barreessaan kun.
Dubartoonni caasaa hawaasaa keessa tokkodha. Akkuma caasaa hawaasa tokkoottis gaheefi dirqama isaanii ba’uu keessatti bakka guddaa haa qabataniyyuu malee, sirnoota adda addaa addunyaan kun keessa darbite keessatti, sadarkaa hawaasaa keessaa akka gadi antummaatti, ilaalamaa turaniiru.
Biyya keenya keessattiis, jechootaafi mammaaksa xiinsammuu dubartootaa miidhuun akka hacuucamaa turantu himama. Waa’ee jechootaafi afoola xiinsammuu dubartootaa miidhan kana hayyuun Mutero Joy jedhamtu kitaaba ishee (Sunday Nation, july 11, 1999, p.16), jedhmau keessatti yoo ibsitu “…traditional folktale have had negative effect on the development of young girls as long as they condition the girls to accept the institution of marriage as the ultimate way of life…” Muteroon barruu ishee keessatti Afoolli keenya maaliif dubartoota gadi qaba jechuun falmiti. Uummanni Oromos, yeroon booda dhiibbaa biyyoota yookaan saboota ollaa kana fudhachuun, yaada gadi aantummaa dubartootaaf qabu calaqqisisuu haa eegalu malee, akka sabaatti Oromoon ilaachi dubartootaaf qabu daran guddaa akka ture kan agarsiisan immoo ragaalee hedduutu mul’ata.
Uummanni Oromoo, ilaacha dubartootaaf qabu kanas bifa garaagaraan ibsaa tureera. Fakkeenyaaf;
Dubartiin dhaloota itti fufsiisuu keessatti dhiira irra gahee ol’aanaa qabdi. Deessee kunuunsuufi ilma biyya bulchuufi duulee biyyaa eeguu waan deessuuf kabaji ishee guddadha jedha. Kana malees, safuu hawaasaafi seera waaqa eeguufi kabachiisuu keessatti dubartiin bakka guddaa waan qabduuf kabaji dubartootaa ol’aanaadha jedhama. Kanas Walaloo Afoola armaan gadii xiinxaluun hubachuu dandeenya.
Caalakaa caala caalaa
Caalli dubartii waasadii
Tokko deessuu ilmaati
Tokko ulattuu qayyaati
Tokko soortuu dhirsati.
Caala kaa caala caalaa
Yoo teesse yoo deessewoo
Dubartii qarree caalaa.
Jechuun Uummanni Oromoo kabajaafi ulfina dubartootaaf qaban keessumaa dubartii deessee dhaloota itti fufsiistu jajuun marartee dubartootaaf qaban muli’isaa turaniiru.
Walaloo Keeyyata jalqabaa keessatti dubartii jajuun kan walalchan, dhimmoota sadii jidduugaleessa godhachuun yoo ta’u, isaanis inni jalqabaa; dubartiin ilma deessu dubartoota hundarra jaalalaafi kabaja qabachuushee kan ibsudha. Haalli kunis dhiiraafi dubra gidduutti qoodinsaafi walcaalmaa uumuuf osoo hintaane, yeroo walaloon kun kalaqametti haala qabatamaa yeroo sanaatiin, baayyachuu waldhabdeefi waraannis waan hedduummatuuf ilma duulee diina biyyarraa ittisu argachuu sanatu irra caalaa kan madaala kaasuufi kana ibsuufis kan jedhame akka ta’e hubachuun barbaachisadha.
Inni lammaffaa dubartiin hunda caaltu yookaan dubartiin dubartii caaltu kan Qayyaa ulattuu akka taatee ibsuufi kana waliin wal qabsiisuun kan ibsamedha. Kunis, dubartiin jaalatamtuufi kabaja guddaa qabdu, kan of qabduu, qulqulluummaashee eeggattuufi kaamettii taate ta’uutu akka isheen caaltu ishee tasise. Kanafimmoo osoo akka har’aa dibanniifi urgooftuun garaagaraa hinbaay’atiin dubartiin Oromoo, Muka urgaa’u kan Qayya jedhamu ulachuun foolii gaarii uumuun Abbaa warraa isaaniitti miiraafi fedhii jaalalaan ofitti simatu. Kana malees baala Hiinnaa jedhamu haamuun kan harkatti dibatan yoo ta’u, kanaafimmoo ragaan Afoola Oromoo Hiinnaan jecha Afaan Oromoofi Aadaa Oromoo keessa jiraachuu mararoo dubri gaafa cidhashee dhammatutu ragaa kalliyaa ta’ee dhiyaachuu mala.
Hiinnaan haama yaakaloo
Seenaan dhaama yaadhakoo
Yoo rafteef qalbeeffadhu. Kan Jedhan san.
Inni sadaffaan dubartiin jaalatamtuufi kabajamtuun dubartii qophee, kan ogummaa mana keessaan badhaate, kan abbaa warraasheefi maatii mana keessa jiru soortudha. Ogummaa kana immoo kan barattu haadhashee irraati. Carraa kanaan maatii ofiillee maqaa gaarii goonfachiisu. Kanaafi kan Oromoon ‘Haadha Ilaalii Intala fuudhi!’ jedhu.
Kana malees, dubartiin hunda caaltu, dubartii Qarree akka taateetti keeyyata lammata keessatti kan walalachame. Qarreen mallattoo dubrummaati. Kan gaa’ila dura saalqunnamtii hinraawwatiin. Qarreefi Qeerroonimmoo waliif kabajaafi ulfina akkasumas jaalalaafi marartee guddaa qabachuutu uummata Oromoo biratti beekama. Dabalataanis Dubri qarree kan dura arganidha. Kan ijoollummaan, dargagummaan waliin guddatanii boodas, jiruufi jireenya waliin utubuuf yeroo jalqabaaf warra irbuu walii seenedha. Waadaa dirqama jireenyaa, fedhii jaalalaafi miira dargaguummaa gammachuusaa kan waliin dhamdhamanii, dhukkubbiisaas kan waliin aadaan. Kanatu caaltuu dubartii ishee taasise. Niitiin Qarree Angafummaas qabdi. Niitii Rakooti. Kan rakoo itti qalan. Yoo kan boodarra dhufte jiraattee ishee duraa kabajuun dirqama. Kunimmoo seera waaqaafi Safuu hawaasaa qabaachuurraa madda.
Aadaa Booranaa keessatti Gumii yookaan kora irratti dhimmi dubartii dursee ilaalama. Gumiin kora taa’ee dhimma ilaalamaa jiru afaanii yoo qabaatanillee, dubartiin rakkoo irra ga’ee himachuu kan dhuftee yoo ta’e dhimma ilaalaa jiran battala dhaabanii, isheef dursa kennu.
Seenaa waraanaafi lola saboota olla waliin yeroo garaagaraa keessatti Uummata Oromoo qunnamaa ture keessattillee dubartoonni Oromoo kanneen ciccimoo ta’an Farda gulufuun dandeettii waraana cimaa qabaachuusanii haaluun hindanda’amne. (Kitaaba Takla Tsaadiq Makuraa, seenaa Itoophiyaa mootii Libna Dingilii hanga mootii Tewoodiros maxx. 2fa A.A) keessatti;
…[ ኦሮሞዋች] ግን ከመካከላቸዉ ድንግላይ ቄስ መነኩሴ ደብተራ ባላገር ነጋደ አልጋ ጠባቂ ጓዝ ጠባቂ የላቸዉም፤ በነፈስ ወከፍ ለጦርነት ይሰለፋሉ፡፡ ከብትና ቤት የሚጠብቁ ሰቶችና ሕፃናቶች ናቸዉ፡፡ ከሰቶች እንኳን ኀይለኞቹ በሰንጋ ፈረስ እየወጡ፤ ሎጋቸዉን ይዘዉ ይዋጋሉ፡፡ ደካሞቹ ሰቶች ደግሞ ባሎቻቸዉ ወደ ጦር ሲሄዱ ከጋጣ ፈረስ ፈተዉ ኮርቻ ጭነዉ ያቀብላሉ፡፡ ስመለስም በቶሎ ለኮ ተቀብለዉ ኮርቻ አራግፈዉ አስረዉ ገፈራ ሰጥተዉ እግር አጥበዉ ያገለግላሉ፡፡
Dubartoonni sirna gadaa keessatti Abbaa Gadaa waan hin taaneef, gadaan dubartoota ni qooda jechuun hirmaannaan dubartoonni Sirna Gadaa keessatti qaban kan duraa dhokatu tokko tokkoos nijiru.
Mee hirmaaannaa dubartoonni sirna gadaa keessatti qabaniifi haala kamiin akka hirmaatan, haa ilaalluu. Gaaffiin asirratti ka’uu qabuufi hubatamu qabu garuu sirni gadaa, Aangoo Abbaa gadummaa dubartootaaf hin kennuu yaada jedhumoo? dubartoonni gonkumaa sirna gadaa keessatti gahee hin qaban kan jedhudha? Dhugaan jiru garuu, yoo dubartoonni sirna gadaa keessatti hin hirmaatiin, gadaanuu hin gaggeeffamu. Gaggeeffamuu mitii gadaanuu hin qajeelu nama jechisiisa. Yaada kana boodatti kan itti deebinuu yoo ta’uu sababoota muraasa akka dubartoonni sirna gadaa keessatti hin hirmaanne osoo hin ta’iin, akka isaan dirqama sirni gadaa ajaju keessa darbuu hin dandeenye godhan haa ilaalluu.
Rakkoo Baayolojikaalawaa: Rakkoo baayoolojikaalawaa yeroo jennu; dubartoonni, uumamaan xurii (laguu) ji’aa waan arganiif, dirqama sirni gadaa ajaju kan akka; godaansa jila deemuu (godaanuu), duulaafi kan kana fakkaatan keessatti hirmaachuun dirqama kana galmaan ga’uu keessatti rakkoo waan itti ta’uufidha jadhama.
Rakkoo gaa’eela: waliin walqabate kunis dubartoonni yeroo heeruman, maatii isaaniirra addaa ba’uun gara maatii abba manaa isaaniitti waan makamaniif Sirni gadaa ammoo, gurmuu sadarkaa gadaafi ijaarama miseensa gadaa caasaa hin diigamneen waan ijaarameef wal falleessuu danda’a. Kanaaf sirni gadaa baduu addaan cituu danda’a jedhanii waan amamananiifidha.
Inni sadaffaan, akka ilaalcha Oromootti dubartoonni muka laaftudhaa jedhama. kunis, akkuma armaan olitti ilaaluuf yaalleetti jabina qaamaa waliin wal qabata. Kanaafuu, balaan yoo isaan mudate, salphaatti waan miidhamuu danda’aniif dirqama sirni gadaa ajaju galmaan ga’uu dhiisu danda’u yaada jedhu of keessaa qaba. Kun egaa, kan calaqqisiisu, hirmaannaa dhabuu dubartoota osoo hin ta’iin dirqama sirni gadaa ajaju galmaan ga’uu keessatti rakkoolee isaan qunnamudha. Erga kana jennee booda, kallatti hirmaachisummaa sirna gadaa dubartoota ammoo haa ilaallu.
Hirmaanna Dubartootaa Raawwii Sirna Gadaa keessatti.
“Dubartoota malee Gadaan Guutuu hin ta’u!”
kana jechuu waanti nama dandeessisu; jalqabarratti dubartoonni caasaa sadarkaalee gadaa keessa hin darbiin malee ilma deessee guddisuufi sirna gadaaf qofa osoo hin ta’iin kan biyya bulchuufi duulee biyya eeguuf geessisuun kan bakka gudda qabdudha.
Kanamalees, raawwii sirna gadaatiif dhangaafi meeshaalee adda adda kan qopheessuu dubartoota. Dhangaan qophaawwus qodaa shan jedhama, qodaan shan kunis; qorii, caccabsaa, cuukkoo kan qabatu yoo ta’uu, yeroo Abbaan manaa ishii gadaa qabatu foolleen akka hin abarreefi akka gadaan abbaa manaa ishee hanquu hin ta’aneef kan qophaawuudha.
Yeroo Abbaan manaa ishee gadaa qabatu, niitii (haati warraa) isaa ammo uffata aadaa uffachuun meeshaalee Aadaa kana akka okolee, gadii qabattee cina deemti. Okoleefi gadiin kunis, mallattoo hormaataafi kabaja looniif qaban kan mul’isudha.
Akka maanguddoonni jedhanitti, yeroo dhiirri gadaa qabatu obboleettiin shaashii mataa isaatti maruufiin seera jedhu. Kunis waa lama ibsa. Tokkooffaa; shaashii sana obboleessa isaanii gadaa qabateef mataatti maruun, hirmaannaa dubartootaa ykn qooda qabaachuu dubartoota kan mulisu you ta’u, gama biraatiin ammoo, isheenis ofkalteetti yookaan gadaa qabateetti jedhamee amanama.
Sababiin inni ol’aanaa gadaan dubartoota malee guutuu hin ta’u akka jennu kan nu taasise, jalqaba yeroo namichi gada qabatu sun akka haati warra isaa seera guutuufi qabdu gaafachuun seera qabaachuu ishee mul’isa.
Namichi gadaa qabachuuf jedhu sun, akka carraa ta’ee, fudhee kan hiikee ta’uu danda’a. Hiikees isheen jalaa baatee nama biraatti heerumuu dandeessi. Yookaan du’aan dhabuu danda’a. Hiikees dubartii biraa fuudhuu danda’a. Kanaaf seera kana kan guutuuf eenyuu? Akkamitti jechuun gaaffii uumuu mala.
Jalqaba, namichi gadaa qabatu kan hin fuune yoo ta’e, Kan seera guutuufi obboolettii ykn firaa aanteedha. Itti aansuun ammoo namichi gadaa qabachuuf jedhu kun fuudhee yoo jiraatee, haadha manaa isaatu seera kana guutaaf.
Yoo kan fuudhee hiike ta’e ammoo bakka isheen jirtu barbaadee akka isheen seera guuttuufiif nigaafata. Isheenis, seera kana guutuufiif dirqama qabdi. Seera Gadaatiin kennameef waan ta’eef. Namichi sun erga hiikeelle haadha manaa biraa kan fuudhe yoo ta’e, seera kana guutufi kan danda’u haadha manaa ishee duraati. Sababiin isaas, haadha mana qarree, kan Rakoo itti qalan waan taateef. Angafummaafi safuun kan ishee duraati. Kanamalees, yoo kan jalaa duutee taatellee, jalqaba bakka awwaala ishee irra dhaabbachuun “Koottu seeraa naa guutii” jechuun yeroo sadii gaaffiin sagalee dhageessisa. Sana booda, haadha manaa boodarra fuudhee yoo qabaate yookaan obboleetti isaatti tumaa seeraa tumuun, seera kana akka guuttuufiif qopheeffata jechuudha. Kunis seera qabeessummaa ykn seera, sana guutuuf seera argachuu ykn mirga argachuu kan mirkaneessu ta’a jechuudha.
Dubartoota Sagantaa Eebbaafi Kadhannaa Irratti.
Sagantaan eebbaa raawwii sirna gadaa keessatti isa ol’aanaadha. Yaad-rimeen eebbaa waa lama ofkeessaa qaba.
Eebbaa jechuun, waan uummataaf barbaachisu waan akka tolu barbaadaniifi eebbisuun qaqqabsiisuu ykn badhaasuu ykn, waan uummataaf gaarii hin ta’iin ammoo, abaaranii balleessuuf yoo ta’u,
Inni lammaaffa ammoo eebbiisuun, seera tumame mirkaneessuu jechuudha. Fakkeenyaaf, seera fooyya’ee bara waliin deemuu uummata akka tajaajiluuf baasaanii erga irratti walii galanii booda, tumaa seeraan mirkaneessu. Seera tumame kanas. “Haa eebbisnu, haa eebbisnu” jechuun mirkaneessu jechuudha. Kanaaf eebbisuun gama tokkoon, waan gaarii akka toluuf kan eebbisani qaqqabsiisan yoo ta’u, karaa gama biraatiin ammoo, seera tumame mirkaneessuu waliin wal qabata.
Dubartoonnis, sagantaa eebba kana irratti argamuun Aadaa ykn Seeradha. Dubartoonni argamanis, qixa abbootii gadaa dhabbaachuun eebba sana mirkaneessu. Dubartoota keessa kan argamanis tokko dubra qarree yoo taatuu; kan saalqunnamti hin eegaliintu filatama. kan biraa ammoo, jaartii cifiree kan jedhamtu yoo taatu kan saalqunnamtii dhaabdeefi laguu ji’aa hin argine ykn kan irraa dhaabbateetu filatama. kunis mallattoo qulqullummaa (sacred)ti.
Kanafuu, dubri qarreefi jaartiin cifiree eebba sirna gadaa ykn raawwii gada irratti argamuu qofa osoo hin ta’iin, kadhaa waaqaa irratti yeroo hongeen dheeratuufi bokkaan baduu, siiqqeefi caaccuu qabatanii yoo waaqa kadhatan akka waaqni dhaga’uufitu amanama.
Dubartoota Bulchiinsa Abbaa Gadaa To’achuu keessattti
Hirmaannaa dubartoonni Sirna Gadaa keessatti qaban kan calqqisiisu kan biraa, dubartoonni seera qabeessummaafi qajeelummaa bulchiinsa abbaa Gadaa hordofuu danda’uu isaaniti. Kunis karaa lamaani.
Tokkooffaa, seera haaraanis ta’e seerri fooyya’ee tumamu yoo jiraate, akka mirga dubartoota hin miineefi kan dubartoota fayyadamoo taasisu ta’uu addaan baafachuun, kan isaan miidhu yoo ta’e akka isaan miidhuu yaada isaanii ibsachuun akka seerichi fooyya’u gochuudhaaf hirmaannaafi mirga kan qaban ta’uu isaaniiti.
Lammaaffaa, jila sirni gadaa bobbaa’uufi, bakka Abbaan Gadaa deemee qubatee biyya araarsuufi jila geggeessu hundaatti haati manaa isaa akka waliin deemtuufi cina teessu seera qabaachuu isheeti. Sababiin isaas bakka jilaa sanaatti Abbaan gadaa dubartootaa biroo mil’aachuun akka qalbiin isaa gara biraatti hin hiramneefi sababa kanaanis, murtee sirrii fudhachuu keessatti akka rakkoon hin uumaamne yookaan, akka dalagaa isaa seeraan raawwatuuf ni to’atti jechuudha.
Kana egaa dubartootni, sirna gadaatiif hundeedha ykn lafee dugdaati kan akka jennu nu taasise.
Dubartoota Seera Waaqaafi Safuu Hawaasaa Eegsisuu Keessatti
Dubartoonni seerri Waaqaafi safuun hawaasaa akka hin cabneefi sababa kanaanis, ijaaramni hawaasaa akka hindiigamne, safuun akka hin banne. Hawaasa seera hinqabne akka hin taane to’achuu keessatti hirmaannaa daran ol’aanaa qabu. Fakkeenyaaf dhimmoota tokkummaa hawaasaa diigu danda’uu jedhaman kanneen akka waldhabdeefi waraana gosaafi gosa gidduutti gaggeeffamu. Wantoota seera Waaqaafi safuu uummataa balleessu jedhaman kanneen akka Gaa’ila firaafi fira gidduutti ta’uufi kanneen kana fakkatan ni to’atu. To’annaan isaanis, yoo firriifi firri walfuudhee wal irraa hore, hawaasa haraamummaa kan jamaan, duudaaniifi namni qaama hir’uu keessatti uumamu, kan abaarsiifi badisi Waaqaa nutti dhufa jedhanii amanan to’achuudha. Haalli ittiin to’atanis, yoo waraanni gosa gidduutti uumame, Siiqqee qabachuun, wal waamanii waraana sana gidduu yoo seenan battalatti lolli qabbana’aa.
Maatii, qe’eefi hawaasa keessa jiraatan keessatti wanti haaraa yoo uumamu, safuun yoo cabu, dubartoonni wal waamanii Siiqqee qabatanii “maaloo kuni Safuudha. Takkaa wanti akkasi aayyoofi Aabboo keenya keessattuu mul’atee hinbeekuu.” Jechuun akka furmaanni hatattamaa itti kennamu Sirna Gadaa waliin wal cina ta’uun hojjetu.
Dubbiin hammatee furmaanni dhibamnaan, maatiifi waatii daa’ima harmaallee osoo hinjedhiin qe’ee gadii dhiisanii, galaana ce’uun muka jalatti walitti qabamu. Haala kanaan hanga furmaanni argamee Abbaan badii dalage adabamee, araarri bu’utti qe’eetti hin deebinu jechuun dhiibbaa (influence) godhu.
Kana ega dubartiin jireenya guyyuu ilmi nama gaggeessu keessatti, hariiroo hawaasa gidduu jirutumsuu keessatti, nageenya biyyaa eegsisuu keessatti, safuufi seera Waaqaa kabachiisuufi to’achuu keessatti gahee tilmaama hinqabne qabu yoo jedhame kan nama hin saalfachiifne.
“dhugumaanuu dubartiin hooggantuu hoogganaa Addunyaa maraati.”
July 26, 2018 January 9, 2019
One thought on “Aadaafi Dubartoota”
Boni T Guta says:
Barruun kun kan kooti. Boonii Tasfaayeen jedhama. Post gochuun gaarii ta’ee otoo jiru maqaa abbaa barreessee irra kutuun keessan garuu gaarii natti hinfakkaatu.
Previous Previous post: Mammaaksota
Next Next post: Walaloo Jaalalaa